Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » OMS dia mampitandrina ny fipoahana vaovao, manapaka ny fanakatonana i Etazonia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Zon'olombelona • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
The World Health Organization (OMS) Nampitandrina androany fa ny variana Ômicron amin'ny coronavirus vaovao dia mety hampidi-doza ny fihanaky ny areti-mifindra.
WHO Nampitandrina ireo firenena mpikambana 194 fa ny mety hisian'ny fipoahana vaovao dia mety hisy fiantraikany mafy, saingy nanamarika fa tsy mbola nisy ny fahafatesany hatreto noho ny ratra vaovao.
Ny filoha amerikana Joe Biden dia nilaza tamin'ny lahateny iray tao amin'ny The trano Fotsy fa ny variana vaovao dia miteraka ahiahy, fa tsy mikoropaka. Araka ny filazan'i Biden, ho tonga any amin'ny tanin'ny Amerikana na ho ela na ho haingana; noho izany, ny fomba tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ny vaksiny.
Ny alakamisy ho avy izao, ny trano Fotsy, ny toeran'ny governemantan'i Etazonia, dia hamoaka paikady vaovao hiatrehana ny areti-mifindra sy ny karazany misy azy mandritra ny ririnina. Joe Biden dia nilaza fa ny drafitra dia tsy hampiditra hetsika vaovao mametra ny hetsiky ny olona na misy aglomerations. "Raha manao vaksiny ny olona ary manao saron-tava, dia tsy ilaina ny fanakatonana vaovao [confinement]," hoy izy.
Nohamafisin’ny filoham-pirenena anefa fa mbola haharitra herinandro vitsivitsy ny hanaporofoana ny fahombiazan’ny vaksiny misy ny Ômicron.
Ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana Anthony Fauci, mpanolotsaina ny governemanta momba ny hetsika manohitra ny areti-mifindra, dia nilaza fa "miharihary amin'ny fanairana mena" ny firenena. “Tsy azo ihodivirana ny fiparitahan’izany”, hoy izy tamin’ny resadresaka nifanaovana tamin’ny fahitalavitra iray ny asabotsy teo.
Araka ny vinavina avy amin'ny WHO ary ny masoivohon'ny fahasalamana iraisam-pirenena, ny isan'ny tranga amin'ny variana Ômicron dia andrasana hihoatra ny 10,000 amin'ity herinandro ity, raha ampitahaina amin'ny firaketana 300 natao tamin'ny herinandro lasa, hoy ny Profesora Salim Abdool Karim, manam-pahaizana momba ny areti-mifindra izay miasa hiadiana amin'ny valan'aretina ao amin'ny governemanta atsimo. Afrikana.
Ny filohan'i Afrika Atsimo, Cyril Ramaphosa, dia niampanga tao amin'ny tambajotra sosialy izay nantsoiny hoe “tsy ara-drariny sy tsy ara-tsiansa” manoloana ny firenena. Ho an'i Ramaphosa, ny fanakatonana ny sisintany sy ny fandraràna ny sidina avy any amin'ireo firenena any atsimon'i Afrika dia tena mandratra ny toekarena miankina amin'ny fizahantany, ankoatra ny maha-“karazana sazy ho an'ny fahaiza-manaon'ny siantifika hamantatra ireo karazany vaovao”.
Ny filohan'i Afrika Atsimo dia niantso ny manampahefana iraisam-pirenena tsy hametraka fameperana amin'ny sidina mankany amin'ny faritra.